Muqdisho: Qoysas khasab looga raray xeryo barakac oo ku sugan xaalad adag - Radio Ergo
(ERGO) – Xabiibo Xaafow Aadan oo ah hooyada 8 carruur ah oo agoon ah wuxuu qoyskeedu dulsaar ku yahay qoys ay qaraabo yihiin. Waxaa hoy u ah mid ka mid ah labo buush oo reerka u dhisan.
Qoyskaan ayaa ka mid ah 2,000 oo qoys oo barakac ah, kuwaas oo si khasab ah looga soo raray 11 xero oo ku yaallay degmada Dharkeynley bishii Juun ee sanadkaan. Milkiilayaashii lahaa dhulka ay xeryaha ku yaalleen ayaa ku wargeliyay inay uga guuraan dhulkooda si ay u dhistaan.
“Mar moos ayaad heleysaa, marna ma heleysid, nolol fiican ma jirto hadda. Qof aan dhar u dhaqno xitaa lama helayo,” ayay Xabiibo ku tiri Raadiyow Ergo.
Haweeneydaan iyo carruurteeda waxay noloshoodu ku tiirsaneyd beer ay ku lahaayeen deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay ka hor intii aysan soo barakacin. Beerta waxaa u tacbi jiray aabbaha qoyska.
Balse markii uu dhintay Xabiibo waxay awoodi weysay in beerta ay abuurto maaddaama aysan wax aqoon ah u lahayn beeraha iyo abuurkooda, sidoo kalena ay awoodi weysay inay shaqaale u qabsato. Beertii ayay isaga soo tagtay waxayna carruurteeda ula soo barakacday Muqdisho.
Waxay sheegtay in iyada iyo qoysaskii kale ee barakaca ahaa la siiyay saddex maalin oo keliya inay uga guuraan xeradii ay ku noolaayeen, halkaas oo uu uga dhisnaa buush yar.
Xabiibo ayaa carruurteeda dabka ugu shidi jirtay dhaqaale aan badneyn oo ay ka heli jirtay dhar-dhaqista oo ay ka qaban jirtay xaafadaha Muqdisho ka hor intii uusan xanuunka Koofid-19 saameyn ku yeelan shaqadeeda. Waxay sidoo kale xustay in dadkii ay dharka u dhaqi jirtay badankooda ay soo iibsadeen makiinadda dharka dhaqda, taasi oo meesha ka saartay baahida shaqadeeda.
Waxay tilmaantay in hadda ay ka xanuunsan yihiin labo ka tirsan carruurteeda oo aysan awoodin inay geyso isbitaal duruufaha dhaqaale ee haysta awgood.
Maxamed Ibraahim Aadan iyo qoyskiisa oo laga soo barakiciyay xerada Aw-Baariyow waxay hadda ka mid yihiin 25 qoys oo buushash ka dhistay dhul si gaar ah loo leeyahay. Waxay bil walbo bixiyaan $4 oo kiro ah.
“Digniin warkeeda ma jiro, saddex maalmood ku guura ayaa nala yiri. Waxaan isku dayay inaan tuugtamo. Waxaas adaa lagu dhaha ee aniga waxba igama galin ayuu igu yiri. San-dulle iyo khasab ayaan ku soo guuray,” ayuu yiri.
“Koowdii hore xammaali ayaan ahaan jiray, waan shaqeyn waayay, dhabarka ayaan xammaalinimo ka qaadi waayay. Afar bil guriga ayaan iska joogaa oo carruurta ayaan hayaa,” ayuu yiri.
Nolosha qoyska Maxamed ayaa ku tiirsan shaqo nadaafadda guryaha ah oo ay qabato hooyada reerka. Shaqadaan ayaa ah mid aysan si joogta ah u helin.
“Cunug wax ii barta oo iskuuul ii aado ma jiro guriga ayay joogaan, illeen macalinkii haddii dugsiga la geeyo wax buu rabaa, illeen isagana ilmaa u baahan, iskuulkii waa sidaa. Kii igu weynaa wuxuu jiraa 14 sano. Inay wax ii bartaan waan jeclaa. Balse duruuf ayaa iska jirto,” ayuu yiri.
Xoolo-dhaqatada Galmudug oo ka cabanaya biyo-yari iyo daaq-la'aan ka jirta deegaannada gobolka